Howl-galo looga saarayo Suuqyada waxyaala dhacay oo ka socda Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka. | Halganka Online
Howl-galo looga saarayo Suuqyada waxyaala dhacay oo ka socda Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka.
Waaxda Fayadhowrka ee ciidamada Xisbada Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa maalimihii lasoo dhaafay waxay wadeen howl galo lagu baarayo raashinka iyo waxyaabo kale oo dhacay ee lagu iibinayo suuqyada kala duwan ee Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka.
Ciidamada oo howlgalka ugu ballaaran ka sameeyay Suuqyada Magaalada Kismaayo ayaa waxay gacanta kusoo dhigeen raashin u badan Baasto taas oo taariikhdeedu dhacday iyo qaar gudaha badda kusoo qoyay, waxyaalo mac macaan ah oo ay inta badan isticmaalaan Caruurta yar yar kuwaas oo dhamaantood caafimaadka halis ku ah.
Waxaa kale oo ay Ciidamadu soo qabteen waxyaalo ay dadku isku naash-naashaan sida Shaambooyinka iyo Kareemyada, kuwaas oo intooda badan ay dhaceen mudo 2 sano iyo ka badan laga joogo. Markii howsha baarista ah ay soo gabagaboowday ayaa waxyaalihii lasoo qabtay waxaa lagu soo raray gawaari waaweyn kadibna dab lagu qabadsiiyay Xeebta Badda Magaalada Kismaayo.
Waaxda Fayadhowrka ee Wilaayaat-ka Islaamiga ah ee ka jira Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa dadaal fara badan oo ay bixiyeen kadib waxay Allaah Fadligiis ku guuleysteen inay Suuqyada lagu ganacsado ka suuliyaan inta badan alaabtii dhacday ee dadka laga iibin jiray sida Raashinka, Daawada, Macmacaanka iyo walxaha la isku naash-naasho, kuwaas oo si khiyaano ah inta loo farsameeyo kadibna bulshada laga iibin jiray halkaasna ay ka dhalan jirtay xaalad caafimaad xumo oo daran.
« Walaalkeen Sheikh Mohamed Umal weydiiya wadaad diintii laga bililiqaystay ?? Ciidamo ka tirsan dowladda kmg ah oo ku le’day qaraxyo Xalay ka dhacay degmada waabari. »